Wafdi hordhac ah oo gaaray London iyo qodobada shirka London looga hadli doonno (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wafdi hordhac ah oo gaaray London iyo qodobada shirka London looga hadli doonno (AKHRISO)
Wafdi hordhac ah oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada London ee caasimadda dalka UK, halkaas oo lagu wado in 11-ka bishaan lagu qabto shir looga hadlaayo arrimaha Soomaaliya.
Shirkaasi ayaa lagu wadaa inay ka qeyb-galaan madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyadda dalka, ururada bulshada, ganacsatada iyo qurbe joogta, iyadoona sidoo kale shirkaasi lagu casuumay in ka badan 40 dowladood iyo ururo kale oo caalami ah.
Wafdiga hordhaca ah ee haatan gaaray London ayaa waxaa hoggaaminaaya wasiirkii hore ee qorsheynta, haatanna ah madaxa qaban-qaabada shirka London ee dowladda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Ceynte.
C/raxmaan Ceynte ayaa sheegay in shirkaasi looga hadli doonno qodobo aad muhiim u ah, kuwaas oo kala ah:-
– Maqaamka Muqdisho
– Arrimaha amniga
– Dib u soo nooleynta dhaqaalaha dalka
– Siyaasada iy dib u eegista dastuurka dalka
– Wada-shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka.
– Iyo qodobo kale oo loo baahan yahay in laga heshiiyo
Shirkaasi oo si rasmi ah u furmi doonno 11-ka bishaan May ayaa waxaa si wadajir ah u shir guddoomin doonno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo, ra’iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey António Guterres.